IMotorola Xoom ligama elisemthethweni lethebhulethi eneHoneyComb kwaye ixhaswe nguGoogle | I-Androidsis
Namhlanje ibiyimini iMotorola izakuveza uphuhliso lwayo entsha ngohlobo lwethebhulethi kwaye u-Andy Rubin sele esibonakalisile ekubonakaleni kwakhe esidlangalaleni kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Igama lakho elisemthethweni Xoom kunye nohlobo lokuqala lwe-Android elungiselelwe olu hlobo lwesixhobo, I-HoneyComb okanye i-Android 3.0 kwaye sibonile iiyure ezimbalwa ezidlulileyo ekuphunyukeni nguGoogle.
Ithebhulethi iya kuba nescreen se-10,1-intshi ngesisombululo se-1280 × 800 pixels ezihambelana neAdobe Flash, a I-1 Ghz iprosesa engumbini kunye ne-1 Gb ye-RAMOkuhamba nezi mpawu zingaqhelekanga yigyroscope, ikhampasi yedijithali okanye isantya. Ineekhamera ezimbini, enye ngaphambili kunye nomva ongasemva oya kuba nesisombululo se-5 Mpx ene-flash ye-LED kunye nomthamo wokurekhoda we-HD. Ungayidlala ividiyo kwi-720p kwaye wabelane ngayo nge-HDMI kwi-1080p okanye kwi-DLNA kwaye inyusa ukudityaniswa kwe-3G kwaye kamva iya kuzisa unxibelelwano lwe-4G.
Iya kuba nokwandiswa kokugcina ngaphakathi kwe-32 GB kunye ne-Wi-Fi 802.11 b / g / n yokunxibelelana ukongeza kwiBluetooth 2.1 + EDR. Iya kufika kwimarike kwi-Q1 yalo nyaka.
Iya kuza nobuninzi bezinto ezinjengezixhasi ukuyigcina ime nkqo, ikhibhodi enonxibelelwano lweBluetooth, ikhava kunye nedokodo kunye neziphumo ze-HDMI, amazibuko amathathu e-USB aya kuthi enze umsebenzi wokudibanisa ithebhulethi nezinye izixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » IMotorola izisa ithebhulethi yayo yeXoom ngeHoneyComb kwaye ixhaswe nguGoogle
Ngaba uya kuba uxakekile ngumboniso ubusuku bonke? Olunjani lona uzinikelo!
Umntu othile uthe i-iPad: P?
Le cwecwe ilungile, ndiyathemba ukuyithenga kwixa elizayo
mmm bantu ... andikuqondi kakuhle ... yeyiphi imania ekufuneka uyithengile yonke into ngeapile ...
Ndicinga ukuba kulungile kakhulu ukuba ithelekiswa neemveliso ezi-2 ezifanayo ... kodwa ubisi, ukuba undithelekisa i-ipad eyaphuma kwiinyanga ezidlulileyo, inento esaza kuthatha ixesha ukuphuma ... ingathi thelekisa iMercedes ukusukela ngoku nepanda yesihlalo kwiminyaka edlulileyo engama-20 ……. i-ipad okanye i-iphone 4, ayinakuphinda ithelekiswe neefowuni eziza kuphuma ngoku, kuba kuyacaca, ngoku zizinto ezithelekisayo. kodwa xa bephuma, bezingenye yeefowuni ezilungileyo ... kwaye ulumke .. Ndiyi-100% ye-android kwaye andiyithandi kwaphela i-Apple .. kodwa kufuneka silungile .. nezinto njengoko zinjalo zi .. njengoko uqhubeka ngoluhlobo, kungaphelanga unyaka omnye Ifowuni iyakuphuma ine-nuclei ezi-1gigas zenkunzi yegusha, kwaye uyakuthi "yintoni ukukhaba kwiibhola i-iphone 8 emfumene"; o)
Kodwa masibone ukuba bagqibe kwelokuba basebenzise inkqubo evaliweyo enokufakwa kuphela kwisiphelo sabo yingxaki yabo, kwaye ngelixa inkqubo ye-Android iphucula kancinci kancinci kwizixhobo zeekhompyuter kunye nesoftware zihlala zimile, kuboniswa ngokubona iimodeli ezintsha ngakumbi ezinokubakho ngalo lonke ixesha, ngelixa beqhubeka nokujikeleza into yabo yokudlala, ephelelwa lixesha ngaphandle kokukhetha, yiyo loo nto kugqitywe ngayo ngabaphathi be-Apple kwaye ndiyabona ukuthelekiswa okufanelekileyo, cinga ukuba i-Android inokufakwa kuphela kwisiphelo sendlela kwaye iyakuhlaziywa qho emva kweminyaka emi 4 okanye njalo.
Phendula kwi kkguet
thixo buza kufika nini obu buhle eArgentina
Kwaye kuthatha umnxeba, akunjalo?